Su’aalo Diini ah iyo Jawaabahooda – Wajibad
Su’aalo Diini ah iyo Jawaaba-hooda
Mahad dhamaan teeda Ilaahay (swt) bey u sugnaatay, isaga ayaanu kaalmo weydiisan neynaa amuuraha adduunka iyo tan aakhiriba. Nabadi dushiisa ha ahaato suubanaha Rasuul keena Muxammadﷺ iyo dhamaan ehel kiisa iyo saxaaba diisa. Aammiin.
Ku darso ogaalkaaga oo ka faa’iidayso su’aalahan Diiniga ah iyo jawaabahoodii oo wada socda waana lama huraan in aad diintaada wax badan ka barataa oo aad ka jawaabi kartaa marka lagu waydiiyo.
Ka Faa’ideysi Wacan
S1aad: Waxaad sheegtaa magaca Malaga suurta afuufay oo kamid ah mallaigta
J1aad: Malaga suurta afuufaya waxaa la yiraahdaa Israa’fiil.
S2aad: Waxaad sheegtaa geedka ka baxa Jahanama bartankeeda?
J2aad: Waxaa la yidhaahdaa Zaquum.
S3aad: Waxaad sheegtaa macnaha magaca Jibriil?
J3aad: Macnaha Jibriil waa Adoon, sida uu ku fasiray Ibnu Cabaas.
S4aad: Waxaad sheegtaa masaajidka salaada lagu tukadaa ay u dhiganto ajar cumro?
J4aad: Waa masaajidka Qubaa.
S5aad: Waxaad sheegtaa maydka xalaasha ah?
J5aad: Maydka xalaasha ahi waa (Ayaxa iyo Kaluunka).
S6aad: Waxaad sheegtaa dhiiga xalaasha ah?
J6aad: Dhiiga xalaasha ahi waa Beerka iyo Beer-yarada.
S7aad: Kumuu ahaa ninkii dakhray Nebigaﷺ, dagaalkii Uxud?
J7aad: Wuxuu ahaa Ibnu Qimah.
S8aad: Kumuu ahaa yuhuudigii Nebigaﷺ, sixray?
J8aad: Wuxuu ahaa Lubeyd binu Acsam.
S9aad: Waxaad sheegtaa ninkii jebiyey dhooshii Nebigaﷺ, dagaalkii Uxud?
J9aad: Wuxuu ahaa Cuqba binu abi Waqaas.
S10aad: Waxaad sheegtaa gabadhii Alle u waxyooday?
J10aad: Waxay ahayd Nebi muuse hooyadii.
S11aad: Waxaad sheegtaa magaalada aan cudurka daacuunku gelin?
J11aad: Waxaa weeye Magaalada Madina Almunawara.
S12aad: Waxaad sheegtaa suuradii sababta u ahayd inuu soo islaamo Cumar binu khadab?
J12aad: Waxay ahayd suuradu Daahaa.
S13aad: Waxaad sheegtaa suurada u shafeeco qaadeysa qofka akhriya?
J13aad: Waa suuratu Mulk (Tabaarak).
S14aad: Waxaad sheegtaa aayada koobeysa dhamaan xuruufta carabiga?
J14aad: Waa aayada u danbeysa suurada al-Fatx.
S15aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii la dilay isagoon weligii Alle u sujuudin?
J15aad: Wuxuu ahaa Cumar binu Thaabit, wuxuu soo islaamay dagaalkii Uxud waxaana la Dilay isla maalintaas.
S16aad: Waxaad sheegtaa shahiidkii ugu horeeyey Islaamka?
J16aad: Waxay ahayd Sumaya bintu Khayaad, (Aala Yaasir) Camaar ibnu Yaasir hooyadii.
S17aad: Waxaad sheegtaa duulaankii (Qaswadii) ugu danbeeyey ee Rasuulku duulo?
J17aad: Waxay ahayd Qaswadii Tabuuk , sanadii 9aad ee Hijrada.
S18aad: Waxad sheegtaa Labadii Asxaabi ee Rasuulku ku dabo tukaday?
J18aad: Abuubakar sadiiq iyo Cabdir-Raxmaan binu Cawf.
S19aad: Waxaad sheegtaa sanadka islaamka loo yaqaan sanadkii murugada?
J19aad: Waa sanadkii ay dhimatay Khadiija binti Khuweylad, iyo Abuu Taalib.
S20aad: Yaa ugu soo hor islaamay reer Madiina?
J20aad: Waxaa ugu soo hor islaamay Sacad binu Suraara
S21aad: Jannada yaa ugu hor gelaaya??
J21aad: Waxaa ugu hor gelaaya Nebigeena Muxammedﷺ.
S22aad: Waxaa sheegtaa Denbigii ugu horeeyey ee Alle lagu caasiyo?
J22aad: Wuxuu ahaa Kibir uu sheydaan ka kibray inuu sujuudo.
S23aad: Waxaa sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qof dila aduunka korkiisa?
J23aad: Wuxuu ahaa Qaabiil binu Aadam oo dilay walaalkii Haabiil.
S24aad: Waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee Qiblada u tukada?
J24aad: Wuxuu aha Asxaabiga la yidhaa Saciid binu Mucaali.
S25aad: Waxaad sheegtaa magaca Asxaabigii Abi Saciid al-Khudriyi?
J25aad: Waxaa la odhan jiray Sacad binu Maalik binu Sinaan (RC).
S26aad: Kumuu ahaa Asxaabigii Nebiguﷺ, yidhi waxaa dileysa koox xadgudubtay?
J26aad: Wuxuu ahaa Camaar binu Yaasir (RC).
S27aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii ku dhashay Kabcada badhtankeeda?
J27aad: Wuxuu ahaa Xakiim binu xisaam (RC.
S28aad: Waxaad sheegtaa Asxaabiyadii Malaku Jibriil Allah salaanta uga keenay?
J28aad: Waxay ahayd Khadiija bintu Khuweylad (RC).
S29aad: Waa kuma sayidka shuhadadu?
J29aad: Waa Xamsa binu Cabdi Muttalib (RC).
S30aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii Nebiguﷺ u sheegay inuu Alle jecelyahay?
J30aad: Wuxuu ahaa Miqdaad binu Camar (RC).
S31aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii ku riyooday Aadaanka?
J31aad: Cabdullah binu Zayid (RC).
S32aad: Waxaad sheegtaa Suuradii Nebiguﷺ, yidhi waxaan ka jeclahay Aduunka iyo waxa dhex yaala?
J32aad: Waa Suuratu, Al-Fatax.
S33aad: Noocyada Sadaqada tee ugu fadli badan?
J33aad: Waxaa ugu fadli badan Biyaha oo lays waraabsho.
S34aad: Waxaad sheegtaa magaca faraskii ugu horeeyey ee Rasuulkuﷺ, ku duulo?
J34aad: Waxaa la odhan jiray Sakab.
S35aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii Malaa’igtu ka xishoon jirtay?
J35aad: Wuxuu ahaa Cismaan binu Cafaan (RC).
S36aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii ugu horeeyey ee lagu aaso Xabaalaha Baqiic?
J36aad: Wuxuu ahaa Cismaan binu Madcuun (RC).
S37aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii geridiisa uu u luxmay Carshiga Alle?
J37aad: Wuxuu ahaa Sacad binu Mucaad al-Ansaariyi (RC)
S38aad: Waxaad sheegtaa Sir-hayihii (xog-hayihii), Nebigaﷺ?
J38aad: Waxaa la odhan jiray Xudeyfa binu-Yamaan (حذيفة بن اليمان) (RC).
S39aad: Kumuu ahaa Asxaabigii Sunta cabay ee yidhi Bism Allaah ee aan waxba ku noqon?
J39aad: Wuxuu ahaa Khaalid Binu Waliid (RC).
S40aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii dilay Aabihii oo gaal ah dagaalkii Beder?
J40aad: Wuxuu ahaa Abu Cubeyda Caamir Binu Jaraax.
S41aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii arkay Masiixu dajaal?
J41aad: Wuxuu ahaa Tamiin binu Aws.
S42aad: Waxaad sheegtaa Magaca caadiga ah ee Abu Hureyrah?
J42aad: Waxaa la yidhaa C/raxmaan binu Zakhar (RC).
S43aad: Waxaad sheegtaa Magaca Abii Ayuub al-Ansaariyi?
J43aad: Waxaa la odhan jiray Khaalid binu Zayid (RC).
S44aad: Waxaad sheegtaa Magaca Asxaabigii Abii Darr al-Qafaariyi?
J44aad: Waxaa la odhan jiray Jundub binu Junaadah (RC).
S45aad: Waxaad sheegtaa Asxabigii Baryadiisa Alle aqbali jiray?
J45aad: Waxaa uu ahaa Sacad binu Abii Waqaas (RC).
S46aad: Waxaad sheegtaa Asxaabiga qudha ee magiciis Quranka lagu sheegay?
J46aad: Waxa weeyaan Zayid binu- Xaarith (RC).
S47aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii geeridiisa ay 70,000, ee Malag soo degeen?
J47aad: Waa Sacad bin Mucaad (RC).
S48aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii Malaa’igtu soo bookhan jirtay?
J48aad: Waxa uu ahaa Cumraan binu Xuseen (RC).
S49aad: Waxaad sheegtaa Asxaabiyadii Rasuulkuﷺ, ku kafnay khamiis kiisii?
J49aad: Waxay ahayd Faadima binu-Asad (Cali binu Abii Taalib hooyadii) (RC).
S50aad: Waxaad sheegtaa Munaafiqii Nebiguﷺ, yidhi qofka doona inuu sheydaan arko kaas ha eego?
J50aad: Wuxuu ahaa Nabtal binu Acsam.
S51aad: Waxaad sheegtaa Magaca Abii Bakar as-Siddiiq?
(أبو بَكر الصّدِّيق عبد الله بن أبي قُحافة التَّيمي القُرَشيّ)
J51aad: Cabdullaah binu Abi Quxaafa.
S52aad: Waxaad sheegtaa Magaca Abu-jahal?
J52aad: Waxaa la odhan jiray Camar Binu Hishaam.
S53aad: Waxaad sheegtaa waxa Alle abuuro wixii ugu horeeyey?
J53aad: Alle wuxu ugu hor abuuray Qalinka.
S54aad: Waxaad sheegtaa Asxaabigii ugu horeeyey ee u hijrooda Ardul-xabash?
J54aad: Cismaan bin Cafaan (RC).
S55aad: Waxaad sheegtaa waxa ugu horeeya ee Adoomada laga xisaabinayo Qiyama?
J55aad: Waa Salaada.
S56aad: Waxaad sheegta qofka ugu horeeya ee Darka (xawdka), Nebiga ka cabaaya?
J56aad: Waa Asxaabiga la yidhaa Suhayb Arruumi (RC).
S57aad: Naarta yaa ugu hor gelaya Qiyaamaha?
J57aad: Waxaa ugu hor gelaaya Suldaan, Madaxweyne ama hogaamiye aan cadaalad sameyn.
S58aad: Waxaad sheegtaa ninka keliya ee Nebiguﷺ, gacan tiisa ku dilay?
J58aad: Waa Ubaya bin Khalaf.
S59aad: Waxaa sheegtaa Saxaabigii Rasuulkaﷺ sirtiisa ahaa?
J59aad: Waxuu ahaa Xudeyfah حذيفه.
S60aad: Waxaa sheegtaa Saxaabigii arkay Masiixuddajaal waqtigii Nabigaﷺ?
J60aad: Waxuu ahaa Tamiimuddaari تميم الدار
S61aad: Waxaa sheegtaa salaada aan lahayn rukuuda iyo sujuuda?
J61aad: Waa salaadda (meydka) ama salaadda (janaasada) lagu tukado.
S62aad: Waxaad sheegtaa magaca Malaga suurta afuufay oo kamid ah mallaigta
J62aad: Malaga suurta afuufaya waxaa la yiraahdaa Israa’fiil.
S63aad: Waxaad sheegtaa geedka ka baxa Jahanama bartankeeda?
J63aad: Waxaa la yidhaahdaa Zaquum.
S64aad: Waxaad sheegtaa macnaha magaca Jibriil?
J64aad: Macnaha Jibriil waa Adoon, sida uu ku fasiray Ibnu Cabaas.
S65aad: Waxaad sheegtaa masaajidak salaada lagu tukadaa ay u dhiganto ajar cumro?
J65aad: Waa masaajidka Qubaa.
S66aad: Waxaad sheegtaa maydka xalaasha ah?
J66aad: Maydka xalaasha ahi waa ””Ayaxa iyo Kaluunka.
S67aad: Waxaad sheegtaa dhiiga xalaasha ah?
J67aad: Dhiiga xalaasha ahi waa Beerka iyo Beer-yarada.
S68aad: Kumuu ahaa ninkii dakhray Nebigaﷺ, dagaalkii Uxud?
J68aad: Wuxuu ahaa Ibnu Qimah.
S69aad: Kumuu ahaa yuhuudigii Nebgaﷺ,sixray?
J69aad: Wuxuu ahaa Lubeyd binu Acsam.
S70aad: Waxaad sheegtaa ninkii jebiyey dhooshii Nebigaﷺ, dagaalkii Uxud?
J70aad: Wuxuu ahaa Cuqba binu abdi waqaas.
S71aad: Waxaad sheegtaa gabadhii Alle u waxyooday?
J71aad: Waxay ahayd Nebi muuse hooyadii.
S72aad: Waxaad sheegtaa magaalada aan cudurka daacuunku gelin?
J72aad: Waxaa weeye Magaalada Madina Almunawara.
S73aad: Waxaad sheegtaa suuradii sababta u ahayd inuu soo islaamo Cumar binu Khattaab?
J73aad: Waxay ahayd suuradu Daahaa.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *** ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Berberanews | Hargeysa | Somaliland
Qoraal Af-Somali, Qoraalo diini ah, su'aal iyo Jawaab, Su'aalo, Su'aalo iyo Jawaabo